भिडियो स्टोरी : आँखामा देखिने समस्या र समाधानका उपाय - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ भिडियाे ∕ भिडियो स्टोरी : आँखामा देखिने समस्या र समाधानका उपाय
डा. योगिता राजभण्डारी रेफ्रयाक्टिभ सर्जन | तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठान मंगलबार, २०७७ चैत्र १७ गते, ११:५३ मा प्रकाशित
आँखाको सबैभन्दा बढी समस्या भनेको ‘रिफ्रेक्टिभ इररु अर्थात दृष्टि दोष भनिन्छ। यसमा चस्मा लगाउन आवश्यक हुने गर्छ । सबैभन्दा बढी आँखाको समस्या भनेको चस्मा लगाउन पर्ने समस्या हो । र, अर्को समस्या भनेको मोतिविन्दू हो। मोतिविन्दू उमेरअनुसार देखिने रोग हो । यसलाई रोकेर रोकिदैन् । कुनै औषधी सेवन गर्दा र चोटपटक लाग्दा कम उमेरमै मोतिविन्दू हुने सम्भावना बढी हुन्छ।
प्रदुषणको कारणले प्राय आँखा सुख्खा हुने समस्या छ । यसको कारणले प्राय आँखा रातो हुने र सुख्खा हुने हुन्छ। यो धेरै उपत्यकामा बस्ने व्यक्तिहरुमा देखिन्छ। यसका लागि प्रदूषणलाई कम गर्न आवश्यक छ। यसको सम्भव कम भएको हुँदा घरबाट निस्कँदा हामीले सुर्यको विकिरणबाट बच्न सोहीअनुसारको डार्क चश्मा लगाउने गर्नुपर्छ । हामीले आँखामा समस्या नहुँदा पनि वर्षमा एकपटक आँखा जाँच गराएको उपयुक्त हुन्छ। यसले गर्दा आँखामा केही रोग भएमा पहिले नै पत्ता लगाउन सकिन्छ।
चश्मा वंशानुगतले गर्दा पनि लगाउनुपर्ने हुन्छ। परिवारमा कोही सदस्यमा रतन्धो र जलविन्दू छ भने एकपटक आँखा चेकअप गराउनु उपयुक्त हुन्छ। मोबाइल, ल्यापटपमा नजिक बसेर काम गर्ने, गेम खेल्ने गर्दा चश्मा लगाउनुपर्ने देखिन्छ। यदि यी कुरामा कम समय बिताएमा आँखामा असर कम हुन्छ। बच्चाहरुलाई हरियाली वातावरणमा खेल्न प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ।
आँखालाई हाननी गर्ने एउटा चीज भनेको प्रदुषण र सूर्यको विकिरण हो । आँखामा समस्या आउने बित्तिकै चिकित्सकमा जाँच नगराई मेडिकलबाट जथाभावी औषधी प्रयोग गर्न हुँदैन। चेकअप नगराएर लामो समयसम्म औषधी सेवन गर्दा मोतीविन्दू हुने र अन्य समस्या आउन सक्छ।
आँखालाई स्वस्थ राख्न आँखाको व्यायाम गर्न सकिन्छ। ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा काम गर्नेहरुले प्रत्येक १ घण्टापछि २० सेकेण्ड आँखा चिम्लेर आराम गर्नुपर्छ। यस्तो गर्नाले आँखा सुख्खा हुने कम हुन्छ।
आँखा कमजोर हुँदा किन टाउको दुख्छ ?
आँखामा थोरै पावर हुँदा सफा देख्दैनौं । त्यसपछि हामी आँखालाई सफा देख्न बल लगाउछौं । जसले गर्दा आँखा र टाउको दुख्ने हुन्छ। टाउँकोलाई दुःख्न नदिन चिकित्सकको सल्लाहमा चस्माको प्रयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ।
भिडियो रिपोर्ट : किन खिइन्छ घुँडाको जोर्नी, दुवै घुँडाको जोर्नी…